निडर | News Polar
अभय श्रेष्ठ पुष ३०, २०७८, शुक्रबार
सुसेलीजस्तो यो सुरिलो स्वर उसलाई कताकता सुनिरहेजस्तो लाग्यो। कसको स्वर हो ? अहो, यो त उसकै श्रीमानको जस्तो स्वर थियो जुन उसले सुन्न नपाएको वर्षौं भइसकेको थियो। तर, उसलाई ‘बहिनी’ भनेको कसोकसो नसुहाएझैँ लाग्यो। यसो ठम्याएर हेरी। निलो जिन्स प्यान्ट, रातो ज्याकेट र गोल्डस्टार जुत्ता लगाएको यो मान्छे अलि ठूलो काँटीको छ। उसको श्रीमान् उत्तीसको रुखजस्तै सुरिलो र हल्का काँटीको थियो। उसको अलमल देखेर त्यो मान्छे हाँस्यो। निलो ट्र्याक-सुट लगाएका जुम्ल्याहाजस्ता देखिने दुइटी केटी पनि हाँसे। होइन, हाँसो पनि उसकै श्रीमान्को जस्तो छ ! तरुनी आइमाई भएर परपुरुषलाई क्वारक्वार्ती हेर्नु भएन।
# अभय श्रेष्ठ # निडर # कथा
प्रकाशित : पुष ३०, २०७८, २१:२५:४९